UBododi Shinshu UbuBuddha buchazwe
UbuBuddha boBonke baseJapan
I-Jodo Shinshu UbuBuddha yiyona ndlela exhaphake kakhulu eBuddhism eJapane nakwiindawo zaseJapan ezihlasele umhlaba jikelele. Isikolo seBuddhism e-Purity Land, ifom yezona ziqhelekileyo zobuBuddha kulo lonke elaseMpuma Asia. Umhlaba onobuqhetseba ovela kwi-5 leminyaka ye-China kunye namaziko ngokuzinikela kokuzinikela ku- Amitabha Buddha , ukugxininiswa kwayo ngokuzinikela kunokuba yinto ekhohlakeleyo yesigodlo eyenza ukuba ithandwa ngokukhethekileyo phakathi kwabantu.
Umhlaba Olungileyo eJapan
Ukusa kwangekhulu le-13 kwakuyixesha elixakekayo laseJapan, kunye neBuddhism yaseJapan. I- shogunate yokuqala yayisungulwe ngo-1192, izisa nayo isiqalo se-Japanese feudalism. Iklasi yama-Samurai yayiza kuvelela. Amaziko eBuddhist aselexesha elide ayekho ngexesha lokonakala. AmaBuddha amaninzi ayekholelwa ukuba ahlala ngexesha leemaphu , apho ubuBuddha buya kuhla.
Isikhumbuzo se- Tendai okuthiwa ngu-Honen (1133-1212) sithiwa yiSiseko seSizwe soPhulo saseJapan, esibizwa ngokuba nguJodo Shu ("iSikole seZwe esiQinisekile"), nangona iidonki kwiNdwendwe yaseTendai eNtabeni iHii zibandakanyekile kwiNkqubo eSebenzi elungileyo. ixesha ngaphambi kokuba. U-Honen wayekholelwa ukuba ixesha leemaphu laliqalile, kwaye wagqiba ekubeni ukuqhelaniswa kwemimandla eyimimandla yayiza kudibanisa abantu abaninzi. Ngoko ke, into elula, ukuthandaza inkolo yayilungileyo.
Umgangatho oqaqambileyo weLizwe eliQinisekileyo ngumculo we- nembutsu, obizwa ngegama lika-Amitabha .-- UNamu Amida Butsu - "ukuhlonela u-Amitabha Buddha." U-Honen wagxininisa ukuphindaphinda okuphindaphindiweyo kwe-nembutsu ukuze kugcinwe ingqondo yokuthandaza ngamaxesha onke.
Kwakhona wakhuthaza abantu ukuba balandele iMigaqo kunye nokucamngca, ukuba bayakwazi.
UShinran Shonin (1173-1262), omnye umonki waseTendayi, waba ngumfundi we-Honen. Ngama-1207 u-Honen noShinran baphoqeleka ukuba bashiye umyalelo wabo wobukhohlakele baze bahambe ngenxa yokuziphatha kakubi ngabanye abafundi baka-Honen.
U-Honen noShinran akazange baphinde babonane.
Xa ekuthinjweni kwakhe kwasekuqaleni uThinran wayeneminyaka engama-35 ubudala, kwaye wayeseyi-monk kuba wayengu-9. Wayengumninki omkhulu ukuyeka ukufundisa i-dharma. Waqala ukufundisa kumakhaya abantu. Watshata waza waba nabantwana, kwaye xa waxolelwa ngo-2011 wayengenakubuyela kwindawo yokuphila.
UShinran wa kholelwa ukuba ukuthembela kokuphindaphindiweyo kweembutsu kubonisa ukungabi nalukholo. Ukuba ukholo lwalo luyinyaniso, wacinga, ukubiza uAititabha kanye kuphela kwakwaneleyo, kwaye ukuphindaphinda kwakhona kweembutsu kwakungumzekelo wokubonga. Ngamanye amazwi, iShinran ikholelwa ekuthembekeni ngokupheleleyo "kwamanye amandla," umhla. Oku kwakungokuqala kukaJodo Shinshu, okanye "iSikole seNqabileyo yeSizwe."
UShinran wayekholelwa ukuba isikolo sakhe akufanele siqhutywe yilo nawuphi na umntu onganamantla. Okanye ugijime ngabani na, kubonakala ngathi. Waqhubeka efundisa emakhayeni abantu, kwaye amabandla aqala ukwakha, kodwa uShinran wenqaba ukuhlonipha ngokuqhelekileyo anikwe ootitshala kwaye wenqaba nokumisela nabani na ukuba babe ngabaphathi ekungabikho kwakhe. Ekugugile kwakhe wabuyela eKyoto, kwaye umzabalazo wamandla waqala phakathi kwamalungu phezu kokuba ngubani oza kuba yinkokheli. IShinran yafa kamva emva koko, le nto ingaphendulwanga.
IJodo Shinshu iyanda
Emva kokufa kukaShinran iibandla ezingenakukhokelwayo zahlukana. Ekugqibeleni, umzukulu kaShinran, u-Kakunyo (1270-1351) kunye nomzukulu kaZonkaku (1290-1373) wabunkokheli obumbeneyo waza wadala "iofisi yasekhaya" kuJodo Shinshu eHonganji (iTempile yeVow Original) apho iShinran yahlaselwa khona. Ekuhambeni kwexesha, uJodo Shinshu waya kubulungiswa ngabafundisi ababengabantu abangekho abemi okanye oothixo kunye nabasebenzi abasebenza njengabelusi abangamaKristu. Amabandla asekuhlaleni ahlala exhasa ngokwawo ngeminikelo evela kumalungu kunokuba athembele kumathente abutyebi, njengokuba amanye amacandelo aseJapan akwenza njalo.
UJodo Shinshu wagxininisa ukulingana kwabo bonke abantu-amadoda kunye nabasetyhini, abalimi kunye nabahloniphekileyo - ngaphakathi kobabalo luka-Amitabha. Isiphumo sasiyimibutho ephawulekayo yokulinganisa eyayihlukile kwiJapan.
Omnye umzuzwana waseShinran ogama linguRennyo (1415-1499) wongamela ukwandiswa kukaJodo Shinshu. Ngethuba lokuhlala kwakhe, ininzi yabantu abavukelayo, ebizwa ngokuthi ikko ikki , yaqhambuka ngokuchasene nabaphathi. Ezi zazingakhokelwa nguRennyo kodwa zacingelwa ukuba ziphefumlelwe yimfundiso yakhe yokulingana. U-Rennyo wabeka nabafazi bakhe neentombi kwizikhundla eziphezulu zokuphatha, ukunika abafazi ababalaseleyo.
Ekuhambeni kwexesha uJodo Shinshu waququzelela nezoqoqosho kwaye waba ngumbutho wezoqoqosho owawunceda udidi lwangaphakathi lwaseJapan lukhula.
Uxinzelelo kunye Ukwahlukana
Umkhosi we- Oda Nobunaga wagumbuqela urhulumente waseJapan ngowe-1573. Wahlaselwa waza wambi wawachitha amaninzi amatempile amaBuddha azisa amaziko eBuddhist phantsi kwakhe. UJodo Shinshu kunye nezinye ihlelo baphenduliwe ngexesha.
U-Tokugawa Ieyasu waba ngumthunzi ngo-1603, kwaye kungekudala emva koko wayala uYodo Shinshu ukuba abe ngamaqela amabini, eyaba yi-Higashi (empuma) iHongangji neNishi (entshona) eHongangji. Eli candelo lisekhona namhlanje.
UJodo Shinshu uya eNtshona
Ngekhulu le-19, uJodo Shinshu wasasazeka kwiNtshonalanga yeNtlanga kunye nabafuduka eJapan. Bona uJodo Shinshu eWest kule mbali kaJodo Shinshu phesheya.
I-17 ibuye ibuye isakhe isisi sigama
IJografi yaseChristchurch, eNew Zealand